Sanad guurada sadexaad ee Ururka Dhalinta Rajada oo lagu qabtay Muqdisho iyadoo kusoo aaday wakhti…. - www.xogtashacabka24.com | www.xogtashacabka24.com Sanad guurada sadexaad ee Ururka Dhalinta Rajada oo lagu qabtay Muqdisho iyadoo kusoo aaday wakhti…. - www.xogtashacabka24.com
Published on October 15, 2017 by admin · No Comments
Munaasabad lagu xusayay sanad-guuradii 3aad eek a soo wareegatay maalinta la aas aasay Ururka Dhalinyarada Rajada Soomaaliiyeed (Jiilul Amal) ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qeyb galay qaar ka mid ah Xildhibaanada dhalinyarada ee ku jira Baarlamaanka Federaalka, Aqoonyahano iyo dhalinyaro, abwaano, fanaaniin iyo dad kale oo lagu casuumay.
Guddoomiyaha Ururka Dhalinta Rajada Soomaaliyeed Maxamed Barawaani oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka warbixiyay sababihii keenay in la aas aaso ururkan iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray, heerka uu maanta joogo iyo hiigsiga fog.
“Waxaan tababarnay in ka badan 4000 oo dhalinyaro soomaaliyeed ah, waxaan wacyigalinnay in kabadan 20,000, waxaan dhisnay oo aan faracyo ka furnnay 9 degmo, waxaan ka qeyb qaadanay gurmadkii abaaraha”ayuu yiri Guddoomiyaha.
Sidoo kale Xildhibaan Aadam Isaaq iyo Xildhibaan C/fataax Qaasim (Qaran Doon) ayaa u hambalyeeyay dhalinyaradan, kuna boggaadiyay howsha ay u hayaan dhalinyarada, iyagoo ugu baaqay in dhalinyarada xaflada ka soo qeyb gashay inay u diyaar garoobaan la wareegida hoggaanka dalka, maadaama ay yihiin mustaqbalka berry.
Waxaa Munaasabadda khudbado hambalyo iyo dhiira gelin ka jeediyay Macalimiin ka socotay Jaamacadaha iyo Ururada dhalinyarada, waxaana ay ku ammaaneen Ururka howsha uu soo qabtay.
Ururka Dhalinta Rajada Soomaaliyeed waa urur Dhalinyaro, Madax bannaan, Maxali ah oo u taagan wacyigalinta, waxbaridda, wanaag u horseedka iyo soo celinta rajadii dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana lagu aas’aasay Magaalada Muqdisho sanadkii 2014.